SIYAASADDA QARAN EE SHAQO-CARBINTA (2019 HARGEYSA) → 3.1 Hannaanka Xulashada – SOMRAR ORGANIZATION
Non-Governmental, Non-Political, Non-profit and Non-partisan organization legally registered in the Ministry of National planning and development in Somaliland.
SIYAASADDA QARAN EE SHAQO-CARBINTA (2019 HARGEYSA)
Home / E-Learning / SIYAASADDA QARAN EE SHAQO-CARBINTA (2019 HARGEYSA)
Farxad weyn bay u tahay Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska in ay soo bandhigto Siyaasaddan Qaran ee Shaqo-carbinta ee Somaliland. Waa markii ugu horeysay ee siyaasad noocan oo kale ah la sameeyo muddo ku siman 27 sanno, taas oo ku salaysan yoolasha iyo ujeeddooyinka Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Somaliland; oo muhiimadiisa ugu wayni tahay sidii loo yarayn lahayd tiradda dhalinyarta shaqo la’aantu hayso, iyadoo loo marayo kobcinta xirfaddooda iyo waxbarashadoodaba. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoysku waxay qaaday talaabooyin lagu dayan karo si ay u hubiso in xirfadda iyo aqoonta dhalinyarada Somaliland ee goobaha shaqada kor loo qaado inta la diyaarinaayo qorshayaasha istaraajiyadeed iyo siyaasaddaha la xidhiidha shaqo-abuurka, ee ay ka mid tahay Siyaasaddan Qaran ee Shaqo-carbintu, si loo yareeyo shaqo-la’aanta saraysa ee Somaliland. Siyaasadda Qaran ee Dhalinyaradda Somaliland ayaa ku joogta wakhtigii ay ka jawaabi lahayd xaddiga badan ee dhalinyaradda shaqo-laantu hayso sababo la xidhiidha xirfaddooda iyo aqoontooda shaqo ee hoosaysa ee aanay ka helin goobaha waxbarasho. Haddaba, xukuumadda Somaliland waxay ahmiyad weyn siisay arrintan qaran, waxaanay soo dejisay habab wax ku ool ah oo lagu hubinayo in dhalinyarada la geliyo goobaha shaqo, si loo kobciyo xirfaddooda, ayna iskula jaanqaadaan siyaasadaha xafiisyada hagga isla markaana maamula fursadaha kooban ee shaqo-carbineed ee ka dhex jira hay’adaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahayba. Waxa aan aad ugu niyad samay in Siyaasaddan Qaran ay fududayn doonto xayndaabka iyo hagayaasha suurto gelin kara fursadaha kooban ee shaqo-carbineed sidii lagu heli lahaa. Sidaas awgeed, wasaaraddaydu waxay ka shaqayn doontaa sidii loogu guulaysan lahaa hirgelinta siyaasadda ee wadanka oo dhan. Waxaanan ku adkaynayaa dhammaan daneeyayaasha kala duwan in ay siyaasaddan siiyaan tixgalin gooni ah, isla markaana dareemaan masuuliyadda inaga wada saaran sidii xirfadda iyo aqoonta dhalinyaradeena loo kobcin lahaa. Sababtoo ah, dhalinyaradu waa kuwa mustaqbalka wadankeena oo dhami ku tiirsan yahay. In lagu quweeyo isla markaana lagu taageero xirfaddaha u muhiimka ah ee ka caawin kara suuqa shaqaduna waa masuuliyad la inaga wada rabo in aynu dareenkeeda lahaano. Ugu danbayntii, waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan shakhsiyaadkii iyo hay’addihii aan waxba ka hakran sidii siyaasaddan looga dhigi lahaa mid rumowda. Wasaaradda waxaa ka go’an sidii Siyaasadda Qaran ee Shaqo-carbintu ay u hirgali lahayd. Hinda Jaamac Xirsi Gaani Wasiirka Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska
Samaynta Siyaasaddan Qaran ee Shaqobarashadu may suurto gasheen haddii aanay si hagar la’ u taageerin haay’ado iyo shaqsiyaad muhiim ahi. Waxaanu si gaar ah u xusaynaa Cabdiqaadir Dayib Askar, Mohamed Elmi Aden Agaasimihii hore ee MESAF iyo Eng. Yusuf Garas oo aqoontooda iyo khibradooda gacan weyn kaga geystay dejinta iyo hirgelinta Siyaasaddan. Waxa sidoo kale aad ugu mahad naqaynaa dhammaan intii wada-shaqayntu na dhex martay intii la dejinayey Siyaasaddan, oo ay ku jiraan wasaaradaha, ururada bulshada, hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahayba. Si gaar ah waxaanu u xusaynaa Som Power, Manhal Hospital, World Vision, Save the Children, Premier Bank, SONYO iyo SOS. Ugu dambayn HAVOYOCO, Oxfam iyo bahda mashruuca ‘Work in Progress’ ayaan uga mahad celinaynaa taageerada maaliyadeed iyo xirfadeed ee ay ka geysteen dejinta Siyaasaddan qaran. Md. Cabdirashiid Ibrahim Sh. Cabdiraxman Agaasimaha Guud Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Jamhuuriyadda Somaliland
DIIWAANKA EREYADA GAABAN
1.1 Muhiimada Siyaasadda
2. UJEEDOOYINKA SIYAASADDA IYO XAYNDAABKEEDA
2.1.1 Ujeeddada Guud
2.1.2 Ujeeddooyinka gaarka ah
2.2 Waxyaabaha Siyaasaddu Jideynayso
2.3.1 Kooxaha Mudnaanta leh
2.3.2 Hay’adaha Mudnaanta Leh
2.4 Sharciyada La Xidhiidha iyo Xayn-daabka Siyaasadeed
2.4.1 Xayn-daabka Sharci
2.4.2 Xayn-daabka Siyaasadda
3. HANNAANKA IYO SHURUUDAHA
3.1 Hannaanka Xulashada
3.1.1 Shuruudaha Shaqo-carbinta
3.1.3 Mabaadi’da Hagaya Hannaanka Xulashada
3.2 Muddada Tababarka Shaqo-Carbineed
3.3.1 Faadiiyoonka uu helayo shaqo-bartuhu
3.3.2 Faa’iidooyinka uu helayo Xafiiska Marti-gelinaya Shaqo-carbintu
3.4.2 Xarunta Tababarka Shaqo-gelinta
3.5 Dhammaadka shaqo-carbinta
4.QIIMEYNTA IYO DABA-GALKA SIYAASADDA
4.1 Xayn-daabka Qiimaynta iyo Daba-galka ee Siyaasadda
4.2 Qiimeynta ay Samaynayso Xarunta Tababarka Shaqo
4.3 Qiimaynta ay Samaynayso Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoysku
4.4 Dib-u-eegista Siyaasadda
Prev 3.0 Hordhac
Next 3.1.1 Shuruudaha Shaqo-carbinta
2 thoughts on “SIYAASADDA QARAN EE SHAQO-CARBINTA (2019 HARGEYSA)”
Amin mohamoud Adam says:
Waa fursad aad iyo aad ugu muhiim dhaniyardda heer somaliland.
Mansh allh waaa fursad dahabiya oon aad ugu baahanahy inaan ka faaiiidaysano dhalinyada graduate ah weliba waaayo challenge wayn ayaa naga qabsada markaan shaqo apply garee is nidhaahno ee experience nala waydiìyo. Aad baan idiinku mahad celinyaa somrar organization
Copyright © 2022 SOMRAR ORGANIZATION. Working days: Sunday to Thursday Working Hours: 8:00 AM to 3:00 PM Location: Somalia.